Ganacsatadda Yar Yar Ee Burco Oo Sameeyay Mudaharaad Cabasho Ah La Hor Tegay Dawladda Hoose | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Ganacsatadda Yar Yar Ee Burco Oo Sameeyay Mudaharaad Cabasho Ah La Hor Tegay Dawladda Hoose
Published on July 30, 2017 by sdwo · No Comments
Burco (SDWO): Ganacsatadda yar yar ee gudaha magaaladda Burco bagaashka ku iibiya ayaa maanta sameeyay mudaharaad ay kaga cabanayeen meheradahoodii ay dawladda hoose ka xidhay, kuwaasoo cabasho xoogan ka muujiyay goob cusub oo ay dawladda hoose u raray.
Meeshaas loo rarray oo ay sheegeen in aanay ku filayn oo ay hore dad kale u buuxiyeen, isla markaana ay cidhiidhi tahay.
Ganacstadda jeeb yarta ah oo ay bulshadda reer Burco u yaqaanaan Dhako-birta ayaa sheegay in muddo toban maalmood ah aanay wax shaqo ah qaban, kadib markii meheradahoodii oo gaadhogacan ahaa loo diiday in ay ku shaqaystaan.
Halka iyaguna ay diideen in ay meesha loo raray ku ganacsatadaan.
“Halkan waxaa isugu timid ganacsatadda yar yar ee magaaladda Burco oo toban maalmood lagaga xidhay meheradahoodii oo aan shaqaysan, maamulka fadhiidka ah ee dawladda hoose ayaa helay, dantii guud oo dhan way cuneen wadanka waxba kama noolla.
Waxaanu u sheegaynaa xukuumadda Somaliland in arrinkayagaa hoos loo eego, oo meel aanu ku shaqaysano lana siiyo” sidaas waxa yidhi mid ka mid ahaa ganacasatadii yar yarayd ee maanta mudaharaadka dhigay.
Sidoo kale waxay cabashadoodu ku sheegeen ganacsatadda Dhako-birta Burco in maamulka dawladda hoose ee Burco ay kala hadleen in aanay meesha loo raray ku filayn, sidaas darteedna meel kale oo ay ku ganacsadaan la siiyo.
Hase yeeshee xoghayaha dawladda hoose ee Burco u cadeeyay in aanu meel kale u haynin, isla markaana ay khasab ku degaan meeshan cidhiidhiga ah ee la dejiyay. “Markii aanu u tagnay xoghayaha dawladda hoose, wuxuu nagu yidhi idiinma hayo meel aan idin dejiyo, taasina wax macquula ma aha” ayuu yidhi ninkaas oo ka mid ahaa ganacsatadda yar yar ee mudaharaadka samaysay oo aanay warbaahintu magaciisa sheegin.
Dhinaca kale dhawaan ayaa xoghayaha dawladda hoose ee magaaladda Burco waxa uu ganacsatadda yar yar Dhako-birta u sheegay in ay ka guuraan goobahaas, haddii loogu yimaado iyagoo wadadda dhexdeedda ku ganacsanaya in la ganaaxi doono.
Waxaanu xusay in ay ganacsatadaas yar yar ugu tallo-galeen in ay u guuraan Hangarka weyn ay Koronto iyo biyo-ba ugu xidheen oo ay xataa xiliyadda habeenkii ku shaqaysan karaan.